हामी नया गाडि बाट याबुलाई सेवा दिने योजनामा छौ डिल बहादुर थापा अध्यक्ष बुटवल यातायात ब्यबसायी समिती | Yatra Khabar
Home अन्तर्वार्ता हामी नया गाडि बाट याबुलाई सेवा दिने योजनामा छौ डिल बहादुर थापा अध्यक्ष बुटवल यातायात ब्यबसायी समिती
बुटवल यातायात ब्यबसायी समीती कस्तो संस्था हो ?
सर्वसाधारण जनताको निमीत्त सस्तो सुलभ र भरपर्दौ जनप्रिय र बिश्वसनीय यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने उदेश्य लिएर जिल्ला प्रसासन कार्यालय रुपन्देहीमा बिधिवत दर्ता भई यातायात ब्यबसायीहरु द्धारा संचालित ब्यबसायीक संस्था हो । संस्था बाट हाल रुपन्देही जिल्लानका बिभिन्न ग्रामिण रुटहरुको अलावा कपिलबस्तु र अर्घाखाचिका बिभिन्न रुटहरुमा यातायात सेवा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
कुन उदेश्यले कहिले स्थापना भएको हो ?
बुटवल यातायात ब्यबसायी समिती समय परिस्थीती र यात्रु हरुको आबश्यकतालाई दृष्टीगत गरी सुसंगठित रुपबाट यातायात सेवा सञ्चालन गरी राष्टिय अर्थतन्त्रको बिकासमा सहयोग पुर्याउने सर्वसाधारण नागरिक लाई छिटो छरितो सरल सहज र ब्यबस्थीत ढंगले सार्वजनीक यातायात सेवा प्रदान गर्ने उदेश्यले बि सं २०५१ सालमा स्थापना भएको हो ।
संस्थामा कति ब्यबसायी आबद्ध रहेका छन ?
बुटवल यातायात ब्यबसायी समितीमा दुई सय २५ यातायात ब्यबसायीहरु आबद्ध रहेका छन भने यस संस्था प्रति ब्यबसायीहरुको आर्कषण बढदै गएको छ ।
यहा हरुको संस्थाले पुराना र जिर्ण जिपहरु चलाएर यात्रुहरुको जिवन जोखिममा पारेको आरोप छनी ?
यो सरासर गलत र झुट आरोप हो । यो आरोपमा कुनै सत्यता छैन । किन भने दुर्घटना आकस्मीक रुपमा हुने हो द। दुर्घटना नया गाडि बाट पनि हुन सक्छ । पुराना गाडी बाट पनि हुन्छ । बाहीर बाट हेर्दँ पुरानो र नया भन्दा पनि गाडिको अबस्था हेरेर कस्तो छ त्यसमा भर पर्ने कुरा हो हाम्रो संस्था बाट संचालन हुने साना ठुला सवै गाडीहरु यातायात ब्यबस्था कार्यालयले तोकेको मापदण्ड भित्र रहेर प्राबिधीक रुपमा जाच पास गराएर यातायात सेवाको स्वीकृती लिएर मात्र संचालन भएका छन । पुराना र जिर्ण गाडिले यात्रुहरुको जिवन जोखिममा पारेको आरोप हाम्रा बिरोधीहरुले लगाएका आरोप सिवाय केही होईन ।
यातायात ब्यवसायीहरुका समस्याहरु के के हुन ?
यातायात क्षेत्रको मुख्य समस्या भनेकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । जसले गर्दा यातायात ब्यबसायी र यात्रु हरुलाई समस्या हुने गरेको छ । त्यस्तै बिभिन्न राजनितीक दल उनका भातृ संस्था तथा अन्य संघ संस्थाहरुले आफ्ना माग पुरा गराउने नाममा बेला बेलामा गर्ने बन्द हडताल र चक्का जाम लगायतका कार्यक्रमहरुमा सवै भन्दा पहिलो निसाना यातायात क्षेत्र नै हुने गरेको छ । जसका कारण यातायात क्षेत्रले ठुलो आर्थिक क्षती ब्यहोनु परेको छ । यसका साथै राज्यले यातायात क्षेत्र र यातायात ब्यबसायीहरुलाई हेर्ने दृष्टीकोण गलत छ । राज्य बाट यातायात ब्यबसायीहरु सधै उपेक्षित छन । राष्टिय अर्थतन्त्रको बिकासमा महत्वपुर्ण यागदान पुर्याएको यातायात क्षेत्र र ब्यबसायीहरुको संरक्षण र हितमा राज्यले स्पष्ट निती निर्माण नगरेका कारण ब्यबसायीहरु ब्यबसाय बाटै बिस्थापित हुनु पर्ने अबस्था श्रृजना भएकोे छ । त्यसैले राज्यले यातायात सेवालाई उद्योगको रुपमा मान्यता दिई यातायात बिकास बोर्डकोे गठन गर्नु पर्छ । यातायात ब्यबसायी , यातायात मजदुर यात्रु र उपभोक्तालाई चेतना जगाउन प्राथमिक बिद्यालय स्तर बाट यातायात शिक्षा लागु गर्नु पर्छ, पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बृद्धी संगै बैज्ञानिक भाडादर प्रणाली अनुसार सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा समायोजन गर्नु पर्ने आबश्यकता छ ।
यातायात ब्यबसायीहरुले मजदुरहरुलाई संघ संस्थाहरुले संरक्षण दिने गरेका कारण चालक परिचालकहरुले लार्पवाही गरेर सवारी चलाउछन भनिन्छ नि ?
कुनै पनि यातायात ब्यबसायीक संस्थाले आफ्नो मातहतमा सञ्चालन हुने सवारी साधनका चालक परिचालक र ब्यबसायीहरुको हित संरक्षण र अधिकारका लागी वकालत गर्नु स्वभावीक हो र दायित्व पनि हो । तर मजदुरहरुलाई संघ संस्थाहरुले संरक्षण दिने गरेका कारण चालक परिचालकहरुले लार्पवाही गरेर सवारी चलाउछन भन्ने कुरा गलत हो पछिल्लो समयमा यातायात क्षेत्रमा प्रवेश गरेका चालक परिचालक आफैमा दक्ष र शिक्षीत भएका कारण पनि दुर्घटना प्रति धेरै सचेत छन । यातायात ब्यबसायी संस्थाहरु आफैले पनि चालक परिचालकहरुलाई दुर्घटना न्युनिकरण सम्वन्धी प्रशिक्षण दिने गरेका छन यसले पनि ब्यसायीक संस्थाहरु दुर्घटना न्युनिकरण गर्न सम्वेदनसिल भएर लागका छन भन्ने पुष्टि गर्छ । गलत गर्ने चालक तथा परिचालक लाई कहिल्यै संरक्षण गरिएको छैन । हाम्रो ध्यान र अभियान दुर्घटना कसरी न्युनिकरण गर्ने भन्ने मै छ ।
दुर्घटनाका पिडीतले लामो समय सम्म क्षतिपुर्ति र राहत पाउदैनन ब्यबसायीहरुले साह्ै झुलाउछन किन ?
हाललाई यस संस्थाको कार्य क्षेत्र गाडि संचालन हुने क्षेत्र र सिमीत रुट मात्र भएकोले दुर्घटनाको संख्या पनि कम हुने गरेको छ । कहिले काही हुने साना ठुला दुर्घटनाको प्रकृती हेरेर हाम्रो संस्थाले घाईते भए तत्काल उपभार खर्च र मृत्यु भए काजक्रिर्या खर्च तत्काल उपलब्ध गराउदै आएको छ । त्यस्तै बिमादावी अनुसार मृतकको परिवार लाई क्षतीपुर्ती उपलब्ध गराउने सवालमा रँज्यले ब्यबस्था गरेको निती अनुसार नै गर्दै आई रहेका छौं । यस्तो अवस्थामा बिमा कम्पनी बाट आउन जती समय लाग्छ सो अवधी बाहेक कुनै पिडीत पक्षले लामो समय कुर्नु पर्दैन । यस्तो अवस्थामा पिडामा रहेको परिवारलाई दुख दिने र झुलाउने काम ब्यबसायी बाट हुनै सक्दैन ।
संस्थाले ब्यसायीहरुलाई राहत दिने के योजना बनाएको छ ?
हाम्रो संस्थामा संस्थापक साधारण र मनोनित सल्लाहकार संरक्षक गरी ६ प्रकारका सदस्यहरु रहेका छन । साना मझौला तथा मिनी बस मालिकहरुले संस्थाको बिधान अनुसार दस्तुर तिरी संस्थाको सदस्यता लिएका छन । यी सवै सदस्यहरुको संरक्षण गर्ने दायित्व संस्थाको हो । सवैलाई न्याय हुने ढंगल आलोपालो गाडि संचालन गरिएको छ कुनै गाडि दुर्घटना भएमा सवारी साधन मर्मत देखि लिएर यात्रुहरुको उपचार सम्मका खर्च संस्थाले नै ब्यहोर्ने गरेको छ । यसका साथै ब्यबसायी र कर्मचारी माथी आई पर्नै कानुनी समीयहरु लगायतका अन्य समस्याहरुमा सहयोग गर्दै आएको छ । यस्ते संस्थाले मालिक हित कोष मार्फत ब्यबसायीलाई आबश्यक सहयोग गर्दै हआएको छ ।
यात्रु हरुको सुबिधाका लागी नया कुनै योजना छन ?
यातायात ब्यबसायीहरुको मुख्य काम भनेको सार्वजनीक यातायात सेवा संचालन गरी यात्रु लाई सुबिधायुक्त सेवा प्रदान गर्ने हो । हामीले पनि संस्थाको स्थापनाकाल देखि यात्रुहरुको सुबिधालाई ध्यानमा राखि ईजाजत प्राप्त रुटहरुमा सरल र सहज ढंगले सेवा प्रदान गर्दै आएका छौ । संस्थाले आन्तरीक मापदण्ड बनाएर पुराना गाडि बिस्थापीत गरी यात्रुहरुलाई अझ स्तरीय सेवा प्रदान गरी नया गाडिमा गन्तब्यमा पुर्याउने सोच र योजनका साथ हामी अगाडि बढदै छौ ।